FBC - Godina Baaleetti qonnaan-bultoota 17,500 caalanii ragaan abbaa- lafummaa kenname
Godina Baaleetti qonnaan-bultoota 17,500 caalanii ragaan abbaa- lafummaa kenname
Finfinnee, Hagayya 07, 2009 (FBC) Godina Baaleetti bara bajataa xumurame qonnaan-bultoota 17,500 caalanii ragaan abbaa-lafummaa kennameera.
Ragaan abbaa-qabeenyummaa hammayyaa kun kan kenname godinicha aanaalee Sinaanaa, Gobbaa, Gaasaraa, Gooroo fi Diinshoo keessatti ta’uu Itti-aantuu Hogganaa Waajjira Bulchiisa fi Itti-fayyadama Lafa Baadiyyaa godinichaa Aadde Sayidaa Tamaam ibsaniiru.
Qonnaan bultoota ragaa kana argatan keessaa kuma 3 kan ga’an dubartootadha.
Akka ibsa Aadde Sayidaatti kana dura kan barame lafa karaa aadaa kennuun bal’inaa fi daangaa lafaa sirriitti waan hin-mul’ifneef madda walitti-bu’iinsaa ta’ee tureera.
Meeshaa hammayyaa ‘GPS’ jedhamuun deggaramuun kaartaan abaa-lafummaa marsaa lammaataa kennamuu erga jalqabee garuu walitti-bu’iinsa daangaarrattii ka’aa ture hambisuusaa himaniiiru.
Kaartaan kun haadha warraa fi abbaa warraa qixa fayyadamoo kan taasisu ta’uusaan garasitti hojimaata kireessuu, dhaalaan dabarsuu fi nama biraaf kennaadhaan kennuu dandeessisu seera qabeessa ta’e kan hordofe ta’uu hoggantuttiin ibsaniiru.
Bara bajataa haaraattis aanaalee hafanitti lafa baadiyyaa harka qonnaan bulaa jiru adda baasuun safara hamayyaan kaartaa kennuuf karoorfamee hojjatamaa kan jiru ta’uu itti-aantuu hoggantuttiin eeraniiru.
Godina Baaleetti lafa heektaara kuma 300 wayita ammaa qonna arfaasaa fi gannaan misoomaa jiru keessaa kaartaan abbaa-qabeenyummaa sadarkaa lammaffaa kan kenname lafa heektaara 18,900 ta’uu odeeffannoon Waajjira Bilchiinsaa fi Itti-fayyadama Lafa Baadiyyaa godinichaa irraa argame ni-mul’isa.
Oduuwwan Biroo « Piroojaktoonni humna meeggaa waatii kuma 1 ol maddisiisan sababa hanqina ‘faayinaansiin’ yeroo qabameef keessatti hin-jalqabamne	Hojiin tola-ooltummaan uummataan dabaalamee waggaa guutuu hojjatamuu qaba: Obbo Lammaa Magarsaa »